နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ပညာရေးကဏ္ဍ အသုံးစရိတ်များယခင်ကထက် အဆများစွာ တိုးတက်အသုံးပြုလျက်ရှိ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရမည်းသင်းမြို့နယ် မြို့လှအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲမှ အထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြုင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် အဆိုပါကျောင်း၌ ကျင်းပသည်။ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်က အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်တိုး ဆိုင်းဘုတ်အား စက်ခလုတ်နှိပ် ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။ယင်းနောက် ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာဘရွှေ၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကျောင်းအဆင့်တိုး အထိမ်းအမှတ် ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးခင
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင်လည်း လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဥပဒေများကို ရေးဆွဲအတည်ပြုပြဠာန်းနိုင်ရန် လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးလျက်ရှိ
အဂတိလိုက်စားမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နည်းပညာနှင့်အကူအညီများပေးလျက်ရှိရာ Spectrum အဖွဲ့နှင့် Gopac အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ရွိုင်ရယ်ကုမုဒြာဟိုတယ် Meeting Room ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Gautam Mukhopadhaya အား ယနေ့ညနေ ၃ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်သည် ထိုင်းပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Somsak Kiatsuranont ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည
ယင်းသို့တွေ့ဆုံစဉ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကက ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား အမျိုးသားလွှတ်တော်က ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ အဆွေတော်၏ ခရီးစဉ်သည် လွှတ်တော်အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရေးအတွက် အောင်မြင်သည့် ခရီးစဉ်သည် လွှတ်တော်အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရေးအတွက် အောင်မြင်သည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နှိင်ငံသည် နယ်နိမိတ်ချင်း မိုင်ပေါင်း ၁၃၀ဝ ကျော် ထိစပ်နေပြီး မဲခေါင်မြစ်ရေကို အတူတကွ သောက်သုံးကြသည့် နိုင်ငံများဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ထို့ပြင် အာဆီယံနှင့် ဂျီအမ်အက်စ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများလည်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အိမ်
​ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Ms. Madeleine Albright အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် National Democratic Institute (NDI) ဥက္ကဋ္ဌ Ms. Madeleine Albright ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ ၄း၃၀ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။
ဗီယက်နမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E Mme. Tong Thi Phong မှ အဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခြင်း
(၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ၏ နှစ်လည် အစည်းအဝေး(The 5th AIPA Caucus Meeting) သို့ မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခြင်း မေ ၁၄ ၊ ဟနွိုင်း
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမအထူးအစည်းအ‌ဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအ‌ဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက် (တနင်္လာနေ့) ၁၀:ဝဝ နာရီအချိန်တွင် စတင် ကျင်းပရန်ခေါ်ယူထားရာ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်စာများကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ ပေးပို့ထားပါသည်။